आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है ! – Tufan Media News
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार १६:४५
एउटा गरिब किसान र उसकी बूढी आमा एउटा पहाडको फेदीमा बस्थे । अन्न उब्जाउनको लागि उनीहरू-संग एउटा सानो टुक्रा जमिन थियो र उनीहरू विनम्र, शान्त र खुसी थिए । उनीहरू बस्ने साइनिंग प्रान्तमा एउटा निरंकुश राज्यपालले शासन गर्थ्यो जो वृद्ध मानिस`हरूको स्वास्थ्यव`स्था र कमजोरी देखेर कायर जस्तै गरी डराउँथ्यो ।यसले गर्दा एकदिन उसले एउटा कठो|र घोषणा गर्यो । उसले पूरै प्रान्तका बूढाबूढी`हरूलाई तुरुन्तै मारि`दिनू भन्ने व्यहोराको आ`देश दियो । वास्त`वमा त्यो बर्बरिक काल थियो र बूढा-बूढीहरूलाई म`र्नको लागि एक्लै छाड्नु सामान्यनै थियो ।
भुइँमा झरेका सल्लाका पातहरू-लाई जम्मा गर्दै उसले विछ्यायो र आफ्नी बूढी आमा-लाई उठाएर त्यसमाथि राख्यो । त्यसपछि आँ’शु भरिएका आँखा र दुखि`रहेको मुटु लिएर उसले आमाबाट विदा माग्यो ।छोरालाई आफ्नो अन्तिम आदेश दिनेबेलामा निस्वार्थ मायाले भरि-पूर्ण आमाको आवाज काँपि-रहेको थियो । ‘तिम्रा आँखा-हरू कहिल्यै पनि कम`जोर नहुन् मेरो छोरा!’, उनले भनिन् । ‘पहाडको बाटो ख|तरा नै खत`राले भरिपूर्ण छ । साव`धानीपूर्वक हेर्दै हिंड र जुन बाटोमा रुखविरुवाका हाँगाविंगाहरू थुप्रिएका छन् त्यहि बाटोलाई पछ्याउँदै जाऊ ।
तिनीहरूले तिमीलाई घरसम्म पुर्याउने छन् । ’छोराका भाव`विभोर आँखाहरूले पछाडि बाटोतर्फ हेरे र त्यसपछि फुटेका र चाउरी परेका बूढी आमाको कर्मशील हातहरू`लाई हेरे । भित्रभित्रै उसको मन छिया`छिया भयो र भुइँतिर शिर निहुर्याउँदै उसले विला`प गर्यो-‘ए मेरी आदरणीय आमा, हजुरको ममता देखेर मेरो मुटु नै टुक्रा`टुक्रा हुन्छ !म हजुरलाई एक्लै छोडेर जान सक्दिन । हामी संगै घर|सम्मको बाटो पत्ता लगाउनेछौं र म`र्नु|परे बरु संगै मर्नेछौं । ’ उसले फेरी एकपल्ट आफ्नो भारीलाई बोक्यो(कति हलुङ्गो लाग्यो उसलाई आफ्नी आमा!) र जूनेली प्रकाशमा आमाले भुइँमा झारेका हाँगा|विंगालाई पछ्याउँदै तल उपत्यकामा रहेको आफ्नो सानो झुपडी`तर्फ लाग्यो ।
उसको भान्छा|कोठाको कुनामा खाने|कुराहरू भण्डारण गर्नको लागि एउटा गोप्य भण्डार थियो जो हत्त`पत्त कसैको नजरमा पर्दैनथ्यो । उसले आफ्नी प्यारी आमा`लाई त्यहीं लुकायो । उसले आमा`लाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू लागि`दिन्थ्यो र आफूले लुकाएको कुरा कसैले पत्तो लगाउला भनेर सतर्कता अपनाउँथ्यो ।समय बित्दै गयो र उसले सुर`क्षीत महसुस गर्दै गयो । तर त्यतिबेला नै राज्यपालले आफ्नो शक्ति दर्शाउने हेतुले फेरी अर्को अविवेकी आदेश दियो । उसको माग थियो कि उसका सबै रैतीले खरानीको डोरी बनाएर उसलाई भेटी चढाउनु`पर्ने थियो । ड`र र त्रा`सले गर्दा सारा प्रान्त नै थर`थर काँप्यो ।
र उसले यो जान्न खोज्यो कि कहाँबाट उक्त किसानले त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेको थियो । किसानले सोच्यो- ‘अब अन्ततः मैले सबै सत्य भन्नै पर्छ’ र उसले आफ्नो सबै कथा खोल्यो । राज्यपालले सविस्तार सुन्यो र त्यसपछि मौनधारण गर्दै गहिरो सोचमा डुब्यो ।धेरैबेरपछि उसले आफ्नो शिर उठायो र गम्भी|र मुद्रामा भन्यो – ‘हाम्रो प्रान्तलाई युवाहरूको बलले मात्र पुग्दैन रहेछ’, ‘शायद मैले ‘केश फुल्दै गएपछि मान्छेमा ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ; भन्ने भनाइलाई बिर्सेछु । यति भनेपछि उसले त्यतिखेर नै आफ्नो कठो`र नियमलाई अन्त्य गर्यो र वृद्धवृद्धाहरूलाई मा`र्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भयो । कथा मन परेमा शेय`र गरेर आमाको सम्मान गरौं कथा – जापानी कथा लेखक मात्सुओ बाशो ( अनुवादक अनुप जोशी )–साङ्केतिक फिचर तस्बिर